_Bhuku rehuni_. Yezvazvino Inoshamisa Nordic Bestseller | Zvazvino Zvinyorwa
Bhuku rehuni. Nekudaro, pasina kumwe kubudirira kana zvakavanzika. Musoro wenyaya Hupenyu musango hakusi kwekunyepedzera futi. Munyori, munyori weNorway asingazivikanwe (kusvikira zvino) anonzi Lars Kubata, inotsvaira nyika yese nechibvumirano ichi pahuni, kana kuti, pane hunyanzvi hwekucheka huni. Zvinogona kudaro kutyisa uye kwepakutanga nekubheja pane yakadaro pfungwa kumira kunze nekudya iyo yekutsikisa musika?
Zvichida mamwe mazita makuru muNordic mabhuku anofanirwa kushamiswa (kana kwete) pakurova kwaMytting, mutori wenhau akazvarwa muna 1968, uyo anga atonyora zvinyorwa zvitatu. Iri bhuku rekuraira uye rwiyo kune yakapusa hupenyu mune zvakasikwa yakatotengesa pasi rese makopi hafu yemiriyoni uye rakashandurwa ku Mitauro 16. Isu tinoongorora ichi chinotengesa-chinoshamisa chiitiko.
Ko kana ndikanyora bhuku nezvekunzwa ikoko, iro bhuku iro vanogadzira matanda vanotaura zvavanofarira uye zvishuwo, asi zvinoita sekunge chiono chekuzvikudza chemuguta seni, asi chimwe chinhu icho muvakidzani wangu angangoda kuverenga?
Izvo zvakataurwa rimwe zuva naLars Mytting (Fåvang, 1968) uye akasvika pazviri. Mhedzisiro, Bhuku rehuni, chisina kujairika (zvirinani) chinyorwa pamusoro peunyanzvi hwekucheka huni, bhuku rekudzidzisa uye kuraira pamiti uye iwo akasiyana marudzi ehuni. Asi zvakare chirevo pane Kufungisisa pamusoro pesimba rekupona uye kurumbidzwa kwehupenyu musango. Uye akabudirira kukwezva kutarisa.
Iyo isingatarisirwi yekubudirira kwekutengesa pamusika wayo wekutanga yaita iyo iyo chirevo chezita rekufamba iyo iri kuwedzera kuwedzera: mumwe wevatakuri vakajairika vekudzokera kuhunhu, kune iyo inonzi "hupenyu hwakanyarara." Nekudaro, iwo akanyanya geeks echinyorwa anovhura ayo mapeji uye anogona kuda kunhuwidza kunhuwirira kwesango, pasi, huswa nemiti. Uye izvo zvakasarudzika huni zvekuti ivo vachangobva kutema musimba uye nekumutsiridza kuedza nedemo ravo rinoshanda kwazvo.
1 Matanda, miti, sango, runyararo ...
2 Echoes yeThoreau
3 Kubudirira kusingatsanangurike?
Matanda, miti, sango, runyararo ...
Iyo yakapusa, yakapusa uye yakadzikama nyaya inogona kungotaurirwa chete zvakanaka nemunhu akazvarwa, akarerwa uye akarerwa mune imwe yenyika dzakawanda kwazvo zviwanikwa zviwanikwa kurwisa kutonhora kunogara kuri pavari.
Mune iwo mativi ekuchamhembe nguva yechando nguva dzose kuuya kwayo. Uye huni hwavo hwekushandisa havana kudzora iota imwe, kunyangwe hazvo maNorwegi asina kushomeka nemafuta. Asi ivo vanoramba vachidya, chete ipapo, anenge mazana matatu kilos pamhuri. Hafu yehuni iyoyo inotemwa zvakananga ivo pachavo. Kubva ipapo kwakauya iyo zano kune Mytting.
Rimwe zuva akaona a vakwegura uye vanorwara muvakidzani aibuda mangwanani ega ega kunoona huni iyo yaive ichiri kufanira kuoma usati waishandisa iyo yechando. Kune Mytting zvaiita senge tsika yeremangwana muvakidzani wake angave asisaone. Uye ndinofunga dimikira rehukama hwemunhu nehuni sekurasikirwa kwechokwadi uye zvakapusa munguva ino yakatarwa nekukurumidza uye tekinoroji.
Kufungidzira vanoti ita zvinhu zvako wega. Inokukoka iwe kuti upinde muganda remunhu uya anotema huni uyo anotarisana takatarisana nechizvarwa chemadzitateguru icho chinomiririrawo huni. Iyo inoreva sei kune moto uye simba rayo nezviuru zvezvinoreva senge kudziya kana kunyaradza.
Kufungidzira kwakafananidzwa neyekutanga kweiyo XIX, Henry David Thoreau. Nyanduri weAmerica, muzivi, munyori wenyaya uye nyanzvi yezvemasikirwo akaratidzira hupenyu hwake mukati memakore maviri echisikigo pabasa rake Walden. Asi zvirokwazvo, zvinodikanwa kubhururuka madaro enguva, kufunga uye zviitiko.
Zviri pachena kwete. Kune vaverengi pane zvese zvavanofarira uye zvese zvinonzwisisika. Kana iwe uri munhu asina tariro mumaguta uye akapindwa muropa neruzha, iwe haugone kukweverwa kubhuku rino. Asi vanoda zororo uye kushamwaridzana nemasikirwo vari kunakidzwa nazvo nemufaro usingataurike.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » _Bhuku rehuni_. Iyo Yekupedzisira Inoshamisa Nordic Bestseller
65 vanyori vanosaina tsamba vachipesana naDonald Trump